Isitolo sezincwadi seCasalinghi Eurocity Shop - Palermo
Isikhathi Eqhubekayo: 08:00 - 20:00
Isitolo sezinto zokubhala - Ikhaya neFenisha
Okubanzi okwabelwe zonke izidingo
4.8 /5 amavoti (amavoti angama-9)
Isitolo se-Eurocity e Corso Calatafimi 838 / D a Palermo iyi-emporium ekhethekile ku indlu, Isitolo sezinto zokubhala, Amathoyizi ngamanani angenakuphikwa, a Ukonga kuqinisekisiwe. Ngaphezu kwalokho, uzothola ezahlukene Imibhalo yababhemayo.
Isitolo sezinto zokubhala seCasalinghi Eurocity ePalermo - Casalinghi
Isitolo se-Eurocity inikeza okunezinhlobonhlobo eziningi zemikhiqizo indlu yemikhiqizo esezingeni elungiselelwe ukuhlanza indlu nokuhlanzeka, njengezimbotshisi, amagilavu, imishanelo, izipanji, okokuhlanza umoya, amabhakede, imikhiqizo yasekhishini, okokuhlanza izimoto kanye nezithuthuthu ngamanani angabizi kakhulu Ukonga a Palermo. Umkhakha omkhulu onikezelwe indlu ihlangabezana nezidingo eziningi zokuhlanza nezokuhlobisa ikhaya, ngokuthenga imikhiqizo indlu ngamanani ancintisanayo egameni Ukonga. Ngaphezu kwalokho, kusuka I-Eurocity uzothola anhlobonhlobo Imibhalo yababhemayo: amamephu, izihlungi nokunye okuningi!
Isitolo sezincwadi seCasalinghi Eurocity ePalermo - Stationery
Isitolo se-Eurocity e Corso Calatafimi a Palermo kuyinto egcwele kahle Isitolo sezinto zokubhala lapho ungathola khona uhla olubanzi lwemikhiqizo yesikole ebonwa yikhwalithi enhle / inani lentengo lesikole Ukonga. Kusuka Isitolo se-Eurocity ePalermo uzothathelwa inketho phakathi kwezikhwama, amacala, izincwadi zokubhalela, idayari nezinye izinto eziningi nge Isitolo sezinto zokubhala kubafana namantombazane aneso elibukhali Ukonga. the Isitolo sezinto zokubhala yindawo ekahle yokuthola konke okudingayo ehhovisi: izinto eziningi zokubhala zehhovisi nebhizinisi lakho nge Ukonga kuqinisekisiwe. Futhi uma ufuna Izinto Ezibhemayo, ubathola bevela I-Eurocity a Palermo!
Isitolo sezinto zokubhala zeCasalinghi Eurocity ePalermo - Amathoyizi
La Isitolo Sempahla Yokubhala inikeza Ukukhetha okuningi kwezinto zezipho futhi Amathoyizi izipho zakho nganoma yisiphi isikhathi, zonke izinsuku zonyaka. Lesi sitolo se Isitolo sezinto zokubhala e indlu wazalelwa ukunikela Amathoyizi egameni Ukonga kunoma ngubani ofuna ukuthenga Amathoyizi yekhwalithi ngamanani ashibhile. Emashalofini we Isitolo se-Eurocity a Palermo uzothola Yiqiniso Amathoyizi lemikhiqizo engcono kakhulu eyake yahlonishwa nemithetho ye-CE yokuba nesiqinisekiso esiphezulu sokuphepha. Hamba uyibheke Isitolo se-Eurocity noma ngabe ufuna Imibhalo yababhemayo!
Isitolo sezincwadi seCasalinghi Eurocity ePalermo - Imibhalo yababhemayo
Isitolo se-Eurocity e Corso Calatafimi 838 / D a Palermo iyihholo elinemikhiqizo eminingi ephansi eyodwa Ukonga Ama-degree angu-360 anakho konke okwenzelwe ikhaya nesikole. Uzomangala ngezinto eziningi ezithengiswa lapha kusuka Isitolo se-Eurocity: indlu, Amathoyizi amaqembu ahlukahlukene yobudala, Isitolo sezinto zokubhala e izindatshana zokubhema njengamamephu nokuhlunga okufanele kuhloswe ngaso ngaso sonke isikhathi Ukonga. Uma ufuna ukuthenga ehholo lapho Ukonga kusekhaya kwe indlu, Isitolo sezinto zokubhala e Amathoyizi, vakashela Isitolo se-Eurocity ePalermo.
Ikheli: Corso Calatafimi, 839 / D
Ucingo: 091 8873046
Umakhala ekhukhwini: 339 2296090
Inombolo ye-VAT: 05388470824